STATUTS (Version malagasy) | TAMIFA Madagascar
STATUTS (Version malagasy)
FANEHOANA FOTOTRA IFANEKEN’NY MPIKAMBANA MIFAMPIFEHY
AMIN’NY SATA ITY FA :
TOKO I : NY FIJOROANY
And 01 : Miorina eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’I Madagasikara araka ny fepetran’ny hitsivolana laharana faha 60.133 tamin’ny 03 oktobra 1960 sy ireo didy manan-kery ny Fikambanana iray antsoina hoe :
And 02 :
– Ny foiben-toerany dia tondroina ao amin’ny Logt A 46 Cité des Assureurs Andranonahoatra Antananarivo Atsimondrano (102)
– Azo afindra amin’ny toerana hafa anefa izany raha tapaky ny BIRAO MAHARITRA.
And 03 : Tsy voafetra ny faharetam-potoana ijoroany.
TOKO II : NY TANJONA SY NY ASA ATAONY
And 04 : Mifantoka amin’ny fametrahana ezaka ho fampivelarana ny maha olona,indrindra ny tanora mba hananany hasina maha izy azy eo amin’ny lafiny fandrosoana no tanjon’ny Fikambanana amin’ny alalan’ny fifanabeazana ny tsirairay hahatsapa ny zony, handray ny adidy aman’andraikiny manoloana ny sehatra sy ny fiaraha-monina misy azy. Izany dia ao anatin’ny fanajana ny soa toavina malagasy sy fiarovana ny tontolo iainana.
And 05 : Ireto avy ny asa atrehiny araka izany :
ü Fandrafetana fandalinana manana endrika maro sy mivaingana ary fananganana tetik’asa miompana kokoa amin’ny fampandrosoana tanora.
ü Fanentanana ara-tsosialy sy fampisongadinana ny lanja amam-piaraisan-kinan’ny tanora isan-tsokajiny.
ü Fanatevenana hatrany ny fahaiza-manao aman-traikefa ananan’ny tsirairay amin’ny alalan’ny fampianarana sy fampihofanana.
ü Fikarohan-dalana ho enti-manatsara ny raharaham-pihariana.
ü Fanolokoloana ara-java-kanto sy fanatanjahan-tena.
ü Fandraisana anjara amin’ny fikajiana sy fanatsarana ny tontolo iainana.
And 06 :
– Ny herin’ny samy Mpikambana ao aminy, ny fiaraha-miasan’ny Fikambanana amin’ireo sokajin’olona na vondrona afaka mifanohana aminy no fomba entin’ny TAMIFA Madagascar manatanteraka ny asany
– Mandala ny fahasamihafana ka tsy manavaka fiaviana, firazanana, fari-pahalalana, sarangam-piainana, finoana, salan-taona na firehana politika.
– Raisiny ho filamatra noho izany ny teny telo (3) hoe :
« FIFANDRAISANA – FIARAHA MIASA – FIFANAMPIANA »
TOKO III : NY MPIKAMBANA
And 07 :
– Ireo olona fantatra sy voasedra tamin’ny asa nentanina Fikambanana, tao anatin’ny raharaham-pihariana na fiainam-piaraha-monina na koa lafin-tsehatr’asa samihafa ka mahafeno ny fepetra firotsahana no manan-jo sy azo raisina ho Mpikambana.
– Miasa am-pahavitrihana ary manatanteraka an-tsitrapo ny andraikitra takiana aminy ny Mpikambana isanisany ho fampiroboroboana sy fanitarana ny ambaindain’ny Fikambanana.
– Ny MPANDRINDRA FOIBE no manamarina ny maha-Mpikambana raikitra sy ara-dalàna ato anatin’ny TAMIFA Madagascar.
And 08 :
– Ny fangataham-pialàna dia tsy maintsy hatao an-tsoratra ary havantana amin’ny BIRAO MAHARITRA hodinihiny.
– Azo esorina tsy ho Mpikambana ihany koa anefa izay nanao hadisoana lehibe teo amin’ny Fikambanana. Ny BIRAO MAHARITRA irery ihany no afaka mandray fanapahan-kevitra amin’ny fanalàna Mpikambana.
– Tsy manana zo hanaraka ny herim-po na ny vola laniny tamin’ny Fikambanana izay Mpikambana nametra-pialàna na niharan’ny fandroahana.
TOKO IV : NY FIVORIAMBE
And 09 : Ny fivoriana mahasolo tena ny Mpikambana rehetra no mandray anjara amin’ny FIVORIAMBE. Izy no ambaratongam-pandaminana tampony indrindra ato anatin’ny Fikambanana.
And 10 : Ny FIVORIAMBE no manapaka ireo sora-draharaha lehibe sahanin’ny Fikambanana. Izy no manao tomban’ezaka sy mamaritra ny soritr’asa ankapobeny . izy no mankato farany ny fandrindrana ny kaontim-pitantanana ary mandany ny teti-bola rehetra hiasàna. Izy no mifidy na manolo ireo Mpikambana ao anatin’ny BIRAO MAHARITRA.
And 11 :
– Manao FIVORIAMBE ara-potoana indray (1) mandeha isan-taona ny Fikambanana ka ny filan-kevitry ny BIRAO MAHARITRA no mandamina izany. Ny filoha kosa no manao sonia ny taratasy fiantsoana sy mitarika ny fotoana.
– Azo atao hatrany anefa ny manao FIVORIAMBE tsy ara-potoana raha heverina ny maha mety ilàna izany na noho ny fangatahan’ny 1/3 ny Mpikambana.
TOKO V : NY BIRAO MAHARITRA
And 12 :
– Miisa dimy (5) ireo Mpikambana foibe ao amin’ny BIRAO MAHARITRA izay fidian’ny FIVORIAMBE isan-taona ka :
01- FILOHA LEFITRA
01- MPANDRINDRA FOIBE
01- MPANDRINDRA FOIBE LEFITRA
– Mahazo milatsaka ho fidiana avokoa ny tsirairay rehefa mahafeno ny fepetra maha-Mpikambana raikitra sy ara-dalàna. Toy izany koa ireo efa amperin’asa
And 13 :
– Ny FILOHA no tompon’andraikitra voalohany sy mitarika ny Fikambanana. Izy no miantoka ny fiarovana ireo hevi-dehibe fototra maha izy azy ny Fikambanana ary manara-maso nyu fizotran’ny fanatontosana an’ireo asa rehetra atrehina. Izy no misolo tena ny TAMIFA Madagascar amin’ny sehatra ilàna izany ary manao ny fankatoavana farany amin’ny fifanaraham-piaraha-miasa amin’ireo hery ivelan’ny Fikambanana.
– Manampy ny FILOHA ny FILOHA LEFITRA indrindra amin’ny fitarihana ary misolo vonjimaika azy raha misy ny tsy fahafahany.
– Ny MPANDRINDRA FOIBE no mandrakitra sy mitahiry ny raharaha an-tsoratra rehetra momba ny TAMIFA Madagascar. Izy no manao fandaminana ny fifandraisan’ny samy Mpikambana. Izy no mandrindra ny fiainam-pikambanana isam-paritra. Isaky ny FIVORIAMBE dia tsy maintsy manao tatitra ireo vaovao sy toe-java niseho tao anatin’ny Fikambanana izy.
– Miara-mifarimbona akaiky amin’ny MPANDRINDRA FOIBE ny MPANDRINDRA FOIBE LEFITRA, indrindra eo amin’ny asa fanentanana.
– Ny MPITANTAM-BOLA no miandraikitra amin-kalalahana ny asa rehetra momba ny raharaham-bola amam-pananana, indrindra eo amin’ny fanamarihana ny vola miditra sy mivoaka. Izy araka izany no mitana ny bokim-bola sy mitahiry ny atontan-taratasy rehetra mikasika ny fampiasam-bola sy ny faktiora . Isaky ny FIVORIAMBE ara-potoana dia tsy maintsy manao ny tatitry ny fitantanam-bola nosahaniny izy.
– Ny BIRAO MAHARITRA dia manao filan-kevitra isaky izay mitaky izany ny toe-draharaha ka manan-jo hangataka izany ireo Mpikambana isanisany ao aminy. Ny FILOHA kosa no miantso sy mitarika ny fotoana.
– Ny Filan-kevitry ny BIRAO MAHARITRA no mandray amin’ny alalan’ny fanapahana ataony ireo lamim-pandrindrana sy fitantanana ankapobeny ho fandavorariana ny raharaham-pikambanana.
TOKO VI : FIDIRAM-BOLA
And 15 : Ny latsakemboka aloan’ny Mpikambana tsirairay izay faritan’ny Filan-kevitry ny BIRAO MAHARITRA isan-taona, ny fanomezana atolotry ny Mikambana, ny fanampiana azo avy amin’ny fiaraha-miasa ivelan’ny Fikambanana,ny vokatry ny fihetsiketsehana samihafa tsy voararan’ny lalana nefa ihany koa tsy manimba ny laza aman-kasin’ny Fikambanana no fidiram-bolan’ny TAMIFA Madagascar.
TOKO VII : FEPETRA FANAMPINY
And 16 : _Mba hahamora ny fiatrehana ireo sehatr’asa karakarainy dia azon’ny Fikambanana atao ny manangana rafitra hafa toy ny VAOMIERA na SAMPANA isan-tokony ato anivon’ny TAMIFA Madagasikara.Toy _izany koa ny fampijoroana rantsan’ny Fikambanana isam-paritra sy hatrany ivelan’ny firenena.
_ Raisina ho Mpikambana mpanolo-tsaina avy hatrany ao amin’ny Filan-kevitry ny BIRAO MAHARITRA ny Mpitari-draharahan’izy ireny.
FANDRAISANA FANAPAHAN -KEVITRA SY FIFIDIANANA
And 17 : Raha tsy feno ny antsasa-manilan’ny mpivory manan-jo hanapa-kevitra amin’ny fotoana nisian’ny fiantsoana voalohany dia tsy maintsy ahemotra efatra ambin’ny folo (14) andro aorian’izany ny fivoriana.Hatao
Ny fiantsoana faharoa ka manan-kery avy hatrany izay fanapahan-kevitra raisina amin’izany na firy na firy ny isan’ny Mpikambana tonga mandray anjara.
And 18 : Latsa-bato miafina no hanaovana ny fomba fifidianana ny olona na ny fandraisana fanapahan-kevitra raha vao misy mitaky izany ny Mpikambana ka izay ambony vato be indrindra no lany na manan-kery. Raha toa anefa ka misy ny fitoviam-bato dia izay Mpikambana maintimolaly indrindra teo amin’ny Fikambanana no ekena ho lany raha fifidianana olona. Izay hiandanian’ny FILOHA na ny Mpitari-draharaha kosa no manan-danja raha fanapahan-kevitra.
FANDRAVANA NY FIKAMBANANA
And 19 :
– Atolotra ny Fikambanana izay tsarain’ny TAMIFA Madagascar fa mitovitovy tarigetra aminy ny fananany raha tapaky ny FIVORIAMBE ny handravana ny Fikambanana.
– Tsy manan-kery ny fandravàna raha tsy toavin’ny 2/3n’ny Mpikambana.
And 20 :
– Afa-tsy ny TOKO I And 02 dia ny FIVORIAMBE irery ihany no mahazo manisy fanitsiana izao sata fototra izao.
– Ny fitsipika anatiny isan’ambaratonga no mameno azy.
And 21 : ity sata ity dia manan-kery avy hatrany aorian’ny fanatontosana ny fombafomba faritan’ny lalàna ary arahina amin’ny fampiharana azy ho fampandehanana ny asan’ny Fikambanan’ny TAMIFA Madagascar.
Posted by Un visiteur on 31 mai 2011 at 7 h 30 min
Tena mahaliana ahy ny momba ilay fikambanana izy fa misy fanontaniana manitikitika ahy ireto:
-Mpikambana voasedra tamin’ny asa nentanina
-Latsakemboka io mety azoko fantarina ve hoe mety eo amin’ny ohatrinona isan-taona eo ho eo azafady mialoha ny hidirana ho mpikambana
-Miara-miasa amin’ny fikambanana hafa koa zany ny TAMIFA Madagascar?
-Mivelatra hatrany amin’ny tontolo ambanivohitra ihany koa ve?
-Araka ny maha fikambanana azy dia tsy asa isan’andro zany fa rehefa misy ny dinika atao zay vao mihaona amin’ny mpandrahara rehetra ka noho izany dia afaka manao asa ivelan’ny fikambanana?
-Ny ezaka ataon’ny mpikambana isaky ny vondrono ( Tanora, Tantsaha…..) ireny zany no vola miditra ho an »‘ny tsirairay?
Izay angamba fa mbola mamerina ny fisaorana etoana ho anareo rehetra ao ny tenako . MAZOTOA DAHOLO Ô!
Posted by RAKOTONIRIANA Noelisoa Jean Michel on 18 juillet 2013 at 20 h 02 min
Tena liana mihintsy izaho amin’ity association iray ity fa tena miavaka ny fototra ijoroany. afaka miaraka miasa ve isika? misaotra tompoko
Posted by TAMIFA Communication on 19 juillet 2013 at 13 h 56 min
Misaotra betsaka anao koa liana amin’ ny TAMIFA Madagascar.Vonona miara-miasa amin’ ny rehetra ny Fikambanana fa miankina amin’ ny hoe inona no iarahana hatao sy hifampifehezana amin’ izany.
De: Naina RAKOTOMALALA